करिश्मा – ताजा समाचार
आस्था राउत प्रकरणमा करिश्मा लेख्छिन्–‘बिचरा गायिकाजी’
पाेखरा ५ माघ- सामाजिक संजालमा भाइरल बनिरहेकी छिन्, गायिका आस्था राउत । प्रहरीलाई गा’ली गर्दै फेसबुक लाइभ गरेपछि उनी विवादित बनेकी हुन् । आस्थाको विषयलाई लिएर साधारण मानिसदेखि सेलिब्रिटीले टिप्पणी गरिरहेका छन् । कसैले आस्थाको पक्षमा बोलेका छन् भने कसैले आस्था गलत भएको लेखेका छन् । सामाजिक सञ्जालमा के भन्छन् ? आस्था राउतको बारेमा हाम्रो […]
गजबको चश्मामा देखा परिन् नायिका करिश्मा मानन्धर (फोटोफिचर)
काठमाडौं – नेपाली चलचित्र क्षेत्रकी चर्चित नायिका हुन् करिश्मा मानन्धर । वि.सं. २०४२ सालमा चलचित्र सन्तान बाट चलचित्र क्षेत्रमा पाइला टेकेकी करिश्मा मानन्धरले हालसम्म धेरैचलचित्रमा अभिनय गरिसकेकी छिन् । पछिल्लो समय उनी चलचित्रमा भन्दा पनि म्युजिक भिडियोमा बढी देखिन थालेकी छिन् । सामाजिक सञ्जालमा पनि निकै सक्रिय रहिरहने करिश्माले कहिले काहि आफ्ना तस्बिरहरु शेयर गर्ने […]